Indlela yethu -I-APICMO Cdmo Manufacturers
Ukuveliswa kwamanye kunye nokwenza isiko, kunokukunceda izazinzulu zikhawuleze inkqubo yazo ye-R & D kwimizi yamachiza kunye neyeza.
I-APICMO ibonelele kuphela abathengi be-ICH ngamanqanaba aphakamileyo aphezulu kunye nama-API aphantsi eendleko. Zonke iimveliso ezinikezwa yi-APICMO ye-China yokuvelisa izakhiwo zivivinywe ngokupheleleyo phambi kokuthunyelwa ukuqinisekisa ubungakanani bemveliso. Le nkonzo iqinisekisa ukuba abathengi be-APICMO bafumana iimveliso ezinobungakanani ngamaxesha onke.
I-APICMO izimisele ukuhlonipha imbeko yekhemikhali yoshishino lwemichiza ukuqinisekisa ukuba zonke iinkonzo zethu kunye neemveliso zinobuhlobo bendalo.
I-APICMO ngu-ISO 9001: I-2008 eqinisekisiweyo kwaye yonke imisebenzi yezoshishino ihambelana ngokuthe ngqo kumgangatho wolawulo lwehlabathi jikelele.
Ngenkampani eneR & D epheleleyo eShanghai, iiLbs ezihlangeneyo kunye neeyunivesithi, izixhobo zokuvelisa ze-5 eHenan naseJiangsu, kunye nenethiwekhi yomthengisi omkhulu kwiChina, i-APICMO intsimi yobuchule obubanzi ihlanganisa uphuhliso kunye nemveliso ye-heterocyclic compounds (ezifana ne-piperidines, ipiperazines, i-pyrrolidines ...), i-spiro compounds, i-boronic acids, i-benzenes, i-amino acids kunye neep peptides, i-chiral compounds, i-inhibitors, i-nucleosides & nucleotides, i-APIs, njl njl.